မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): Facebook account အခိုးခံရရင် ပြန်ယူနည်း ======
Facebook account အခိုးခံရရင် ပြန်ယူနည်း ======
1. Account ကို လော့ချပါ။
- browser မှာ www.facebook.com ကို ဝင်ပါ။
Forgotten password နှိပ်ပါ။
account ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ mail or phone number ရေးပြီး Search နှိပ်ပါ။
- account ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် www.facebook.com/hacked ကို ထပ်သွားပါ။
(ဖုန်းနဲ့သုံးနေတာဆိုရင် browser မှာ request desktop view / desktop site ကို အရင်ပြောင်းပါ။)
My account is compromised ကိုနှိပ်ပါ။
- နောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ password ကိုရေးပြီး Login ဝင်ပါ။
If you didn't remember ...... click here ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။
အဲလိုမရေးထားပဲ Request new password ဆိုတာပဲတွေ့ရင် နောက်ထပ် password အဟောင်းတစ်ခု ထပ်ထည့်ပြီး login နှိပ်ပါ။
click here ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
- ရွေးစရာသုံးခုလောက် တွေ့ရပါမယ်။
I didn't do this, Try logging in again,
Reset my password, Lock my acccount
- Lock my account ကိုနှိပ်ပါ။
Lock my account မရှိရင် I didn't do this ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ lock my account ကို ထပ်နှိပ်ပါ။
ဒါဆို account ကို လော့ချတဲ့အဆင့် ပြီးပါပြီ။
- လော့ချလိုက်ပြီဆိုရင် အကောင့်ကို Identity verify မလုပ်ပဲ ဘယ်သူမှဝင်လို့မရတော့ပါဘူး
- Just let me change my password, Reset my password, I think I'm hacked.
အဲဒီသုံးခုပဲတွေ့ရင်တော့ password change
ခံရတာကြာပြီဖြစ်လို့ old password တွေ သုံးမရတော့တဲ့သဘောပါ။
2. Account ပြန်ယူတဲ့အဆင့်
- mail ပါ အခိုးခံရတာ မဟုတ်ရင် ပြန်ယူဖို့လွယ်ပါတယ်။
အပေါ်ကလို လော့ချစရာတောင် မလိုပါဘူး။
- ကိုယ်သုံးတဲ့ mail ကို login ဝင်ပါ။
Facebook ကပို့ထားတဲ့ password change, primary email change အကြောင်းကြားစာတွေကို ရှာပါ။
- အဲဒီစာထဲက If you didn't do this, please secure your account ကို နှိပ်ပါ။
ဖုန်းနဲ့သုံးတာဆိုရင် အမြဲတမ်းသုံးလေ့ရှိတဲ့ browser ကိုရွေးဖွင့်ပါ။
- Link ကိုဖွင့်ပြီး Continue / This wasn't me / I didn't do this တစ်ခုခုကို နှိပ်ပါ။
- Facebook account settings ထဲမှာ recognised လုပ်ထားတဲ့ browser ဆိုရင် password အသစ်ပေးရမယ့်နေရာကို ရောက်သွားပါမယ်။
pw အသစ်ထည့်ပြီး ကိုယ်မသိတဲ့ mail, phone, app password တွေကို remove လုပ်၊ အရင်သုံးခဲ့တဲ့ mail ကို ပြန်ထည့်ပြီးရင် account ကို ပြန်သုံးလို့ရပါပြီ။
mail အဟောင်းကို Facebook က လက်မခံတော့ရင် back နှိပ်ပြီး mail အသစ်တစ်ခုထည့်ပါ။
- Recognised browser မဟုတ်ရင် photos of friends, security question, trusted contacts တွေမေးပါလိမ့်မယ်။
မဖြေနိုင်ရင် Uploadaphoto id ကို နှိပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ passport တစ်ခုခုကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါ။
mail အသစ်တစ်ခု ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ID ပို့ပြီး ဆက်လုပ်ရမယ့်အဆင့်တွေကို နံပါတ် (၃) မှာကြည့်ပါ။
- account ကို ချက်ချင်းပြန်ဝင်မရရင် အပေါ်က နံပါတ် (၁) မှာ ရေးတဲ့အတိုင်း လော့ချထားလိုက်ပါ။
3. Mail ပါအခိုးခံရတယ် (or) mail ဝင်မရရင်
- account ကို အရင်လော့ချပါ။
- forgetten password ကို ပြန်ဝင်ပြီး No longer have access to these ကို နှိပ်ပါ။
mail အသစ်လိပ်စာ ဖြည့်၊ Continue နှိပ်ပါ။
I can't login form ဖြည့်ဖို့နေရာကို ရောက်ပါမယ်။
(No longer have access to these ကို နှိပ်လိုက်လို့ mail အသစ်ထည့်ရမယ့်နေရာကိုမရောက်ပဲ No email access. Done. ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့ ပြန်ယူလို့ရဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။
Mail ထဲကို ဝင်လို့ရမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။)
- Full name မှာ account ထဲက နာမည်ကို ရေးပါ။
Link URL မှာ ရေးစရာမလိုပါ။
Select your issue မှာ Other ကိုရွေးပါ။
Mobile number မှာ +959 ရေးပါ။
Describe your issue မှာ My account was hacked. လို့ရေးပါ။
Choose file ကို နှိပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ passport တစ်ခုခုကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထည့်ပါ။
- ၅ မိနစ်ကြာရင် ကိုယ်ထည့်ခဲ့တဲ့ mail အသစ်ကို Facebook က စာပို့လာပါမယ်။
My account was hacked. Please help me. လို့ရေးပြီး reply ပြန်ပို့လိုက်ပါ။
- Facebook Team က ID ကိုစစ်ဆေးပြီး account ထဲက info တွေနဲ့ ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင် တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း mail ထဲကို account unlock link ပြန်ပို့ပေးပါတယ်။
- အဲဒီ link ကို ဝင်လိုက်ရင် password အသစ်ပေးရမယ့်နေရာကို ရောက်သွားပါမယ်။
pw အသစ်ထည့်ပြီး ကိုယ်မသိတဲ့ mail, phone, app password တွေကို remove လုပ်၊ mail အသစ်ထည့်၊ verify code ဖြည့်ပြီးရင် account ကို သုံးလို့ရပါပြီ။
အထက်ပါနည်းလမ်းတွေကို account ခိုးခံရပြီး တစ်ပတ်အတွင်းလုပ်နိုင်မှ ပြန်ရပါတယ်။
Old password နဲ့လော့ချနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ID နဲ့ပြန်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အကောင့်ထဲက နာမည်၊ မွေးနေ့တွေ မှတ်ပုံတင်ထဲကနဲ့ တူဖို့လိုပါတယ်။
ခိုးတဲ့လူက နာမည်မွေးနေ့တွေ တလွဲပြောင်းသွားတာ ပြသနာမရှိပါ။
သူမပြောင်းခင်အချိန်က ကိုယ်သုံးခဲ့တဲ့ old password နဲ့ လော့ချနိုင်တယ်ဆိုရင် Fb Team က ID ကို လက်ခံပါတယ်။
Thazin Hanna Ko
shared Thazin Hanna Ko's post.
Author MSSK at 3:08:00 PM
Labels: Facebook Hacking, Hacking နည်းပညာများ, Lock ကျသောအကောင့်ပြန်ယူနည်း